श्रीमती सात प्रकारका हुन्छन्, तपाईंको श्रीमती कुन वर्गकी ? प्रकार बारे वर्णन सहित – Khabaarpati
October 12, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on श्रीमती सात प्रकारका हुन्छन्, तपाईंको श्रीमती कुन वर्गकी ? प्रकार बारे वर्णन सहित
काठमाडौं। तपाईलाई थाहा छ श्रीमती कति किसिमका हुन्छन् ? बौद्ध ग्रन्थमा श्रीमतीका प्रकार बारे एउटा रमाइलो वर्णन भेटिएको छ । भगवान गौतम बुद्ध आफैले सात किसिमका श्रीमतीहरूको बारेमा बयान गरेका हुन् ।कुरा गौतम बुद्धले धर्म प्रचार गरिरहेको बेलाको हो । त्यस कालमा अनाथपिण्डिक नामका एक व्यक्ति थिए । उनी आफै, उनका छोरा र दुई छोरी साह्रै धर्मात्मा थिए ।